प्रस्तावित व्यक्ति सम्धी विवादमा मुछिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अध्यक्षको नियुक्ति अन्योलमा ! - Himali Patrika
प्रस्तावित व्यक्ति सम्धी विवादमा मुछिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अध्यक्षको नियुक्ति अन्योलमा !
हिमाली पत्रिका १४ भाद्र २०७७, 11:04 am
काठमाडौं । प्रस्तावित व्यक्ति तीव्र विवादमा मुछिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ । सरकारले डा. उपेन्द्र कोइरालालाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
नातावादका आधारमा नियुक्ति गरिएको भनेर व्यापक विरोध भएपछि कोइरालाका सम्धी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नै केही दिन नियुक्त रोक्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बतायो ।
बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार कोइरालालाई बैठकमा उपस्थित हुनका लागि इमेल र टेलिफोनमार्फत जानकारी पनि गराइएको थियो । तर उनले बैंकका केहि सञ्चालकलाई आफू अध्यक्ष हुने पक्का नभई नआउने बताएका थिए ।
‘म धेरै ठाउँमा ठूला-ठूला नियुक्ति खाइसकेको मान्छे, अब एउटा बैंकको सञ्चालक मात्रै बनेर आउँदिन, बरु नियुक्ति नै चाहिँदैन भनेर खबर पठाउनु भएको रहेछ,’ एक सञ्चालकले भने ।